Apple သည် iOS 11 ၏တတိယမြောက်အများပြည်သူသုံး beta ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
Apple က iOS 11 ၏တတိယမြောက်အများပြည်သူဆိုင်ရာ beta ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
ငါတို့ရှိသမျှသည်အနီးကပ်စောင့်ရှောက် iOS 11 မှာဘာအသစ်လဲ, နှင့်နွေရာသီပိတ်ပင်တားဆီးမှုအပေါ်ယောက်ျားလေးများ၏လည်ပတ်မှုစနစ်များကိုသတင်းများအတွက်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ Apple ၏ beta test ပရိုဂရမ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးသောကြောင့်၎င်းသည်သူတို့အတွက် Beta ဗားရှင်းများတွင်စမ်းသပ်နိုင်သည့် iOS အသစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခဏတဖြုတ်ပတ်ပတ်လည်တွင်ရှိနေပြီးစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ ။
အကယ်၍ မနေ့က Apple သည် developer များအတွက် iOS 11 Beta4ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပါကယနေ့သည် iOS 11 ၏တတိယမြောက်အများပြည်သူသုံး Beta ကိုထုတ်လွှတ်သည့်နေ့ဖြစ်သည်။ iOS 11 ၏အသစ်အဆန်းများကိုစမ်းသပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးထည့်သွင်းနိုင်သည် Beta version အသစ်။ ခုန်ကျော်ပြီးနောက် iOS3၏အများသုံး Beta 11 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသင့်အားပြောပြပါမည်။
ဒီမူကွဲအသစ် IOS3Beta 11 သည် iOS 11 developer များအတွက်စတုတ္ထ beta တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသောသတင်းများအားလုံးကိုဖော်ပြသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့ယူဆောင်လာသည် beta ကိုဗားရှင်း အက်ပလီကေးရှင်းအိုင်ကွန်များ၏ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းလဲ အထူးသဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုများ ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်။ မနေ့ကကတည်းက (developer တွေအတွက်) iOS 11 Beta4ကိုစမ်းသပ်နေပါတယ်၊ အမှန်တရားကတော်တော်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်၊ နောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်နိုင်တာနဲ့အတော်လေးနီးစပ်နေပါတယ်၊ အနည်းဆုံး beta ဗားရှင်းနှစ်ခုကိုနောက်ဆုံးမတိုင်မီတွေ့ရမှာပါ စက်တင်ဘာလလတွင်ဖြန့်ချိ။
ဒါကြောင့်သင်သိ iOS 11 ၏နောက်ဆုံး beta ကိုရယူရန် run သည်Apple မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက် operating system သစ်၏ beta3ပထမ ဦး စွာသင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည် အများပြည်သူ beta အစီအစဉ်ကို Apple, ဒီအတွက်မင်းကိုထားခဲ့တာတွေကိုမင်းလိုက်နာရုံပါပဲ ပို့စ်တင်မယ် ဒီအစီအစဉ်အတွက်စာရင်းသွင်းပါ. နောက်ပိုင်းတွင်အများသုံး beta version အသစ်ကို app တွင်တွေ့နိုင်သည် ချိန်ညှိချက်များ, အထွေထွေအပိုင်းအတွက်, ပြီးတော့ဆော့ဝဲလ်အပ်ဒိတ်အတွက်iOS3မှ Beta 11 အသစ်ကိုသင်မည်သို့ရရှိပြီဆိုသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ထိုပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားပြီးပါပြီ။ အချို့သောအခြား bug ကို နှင့်သင်၏တစ်နေ့တာတွင်သင်အသုံးပြုသော application အချို့သည်မှန်ကန်စွာအလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » Apple က iOS 11 ၏တတိယမြောက်အများပြည်သူဆိုင်ရာ beta ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Mac မိန်းမ ဟုသူကပြောသည်
အိုး။ ကောင်းပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါ post ကိုဖတ်ပြီးကောင်းပြီ၊ developer တစ်ယောက်အနေနဲ့မှတ်ပုံတင်ပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ comment ငါမှတ်ချက်ပေးတဲ့ "bug တစ်ခု (သို့) အခြားတစ်ခု" ကဘာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွေးမိတယ်။
Mac Woman အားစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ - ဒီတစ်ခုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရမလား၊ နောက်တစ်ခုကိုစောင့်နေလားမသိဘူး။
Francisco Moreno Jimenez ဟုသူကပြောသည်
အများပြည်သူအတွက်သို့မဟုတ် developer များပိုမိုတည်ငြိမ်သောမေးခွန်းတစ်ခုမှာ?
Francisco Moreno Jimenez သို့စာပြန်ပါ
ဒါဟာတူညီတဲ့ Beta It's ပဲ
iOS 11 သည်အလိုအလျောက် WiFi ဆက်သွယ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်
စက်တင်ဘာလတွင် Apple Watch Series3ကိုမိတ်ဆက်မည့်အချိန်ဖြစ်သည်